Indonezia: Nanangana Ny Kaonty Twitter-ny Ny Minisitra Mamim-bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2012 5:32 GMT
Nibahana tanteraka tao amin'ny tontolon'ny aterineto indray ny amin'i Dahlan Iskan, Minisitry ny Orinasam-panjakana, indrindra teo amin'ireo mpisiokantserasera Indoneziana.
Tamin'ny 19 Martsa lasa teo, nahatonga fahasosorana tao amin'ny arabe fandoavan-kaba ao Jakarta i Dahlan rehefa sorena noho ny filaharambe nampikatso ny lalany. Vao haingana i Dahlan no niangavy mba fiara dimy ihany no milahatra isaky ny tranokely fandoavam-bola. Tamin'io maraina io, sorena tanteraka izy nahita ireo fiara marobe milahatra kanefa roa tamin'ireo tranokely efatra ihany koa no nisokatra. Nivoaka ny fiarany avy eo i Dahlan ka nanala ny sakanan-dalana ary namela ireo fiara rehetra, fara-fahakeliny 100, nandeha tsy nandoa tapakila.
Azo lazaina fa fanararaotam-pahefana ny fihetsika nataony, kanefa olana iray lehibe ao Jakarta renivohitra ny fitohanam-be isan-kerinandro ka ilaina arak'izany ny fitantanana mahomby. Niteraka resabe ny fihetsiky Dahlan indrindra tao amin'ny valantserasera.
Tamin'ny herinandro teo, efa namerina hafetsena toy izany izy saingy ny làlana ratsy andoavan-tapakila no nokendreny satria orinasa tsy miankina no mitantana izany. Niala-tsiny izy anefa tamin'izay, ka mbola nahita fitia teo amin'ny vahoaka. Talohan'ny zava-nitranga tao amin'ny lalana andoavan-tapakila, nanaitra ny sain'ny maro i Dahlan raha niakatra tanaty lamasinina handeha hanatrika ny filankevitry ny minisitra tao Bogor (sahabo eo amin'ny 60km miala ao Jakarta) tamin'ny volana desambra. Tamin'ny faran'ny volana teo koa, ohatra, tao an-tranonà tantsaha ao Afovoan'ny Java izy no nitoetra nandritra ny alina, rehefa avy nanampy ilay mpamboly nanangona atody.
Andro vitsy lasa, nanangana ny kaonty twitter azy manokana i Dahlan. Enina ora taorian'ny famoahany sioka roa, efa ho olom-pirenena eo amin'ny valo arivo sy iray alina eo sahady no mpanaraka azy.
Indreto fihetseham-po sasany hita tao amin'ny twitter
@TE8270 “Arahabaina amin'izao kaonty Twitter-nao ofisialy izao, midika izao fa afaka mampandre anao mivantana izahay vahoaka mikasika ny tolotra ao amin'ny orinasam-panjakana.”
@aforasri “Tongasoa ato amin'ny Twitter, efa maro ireo olom-pirenena mpisiokantserasera no niandry ny fidiranao tato amin'ny Twitter, Andriamatoa. Faly.”
@NajwaShihab (Mpanentana amin'ny fahitalavitra Metro): nanokatra ny kaonty twitter-ny “@iskan_dahlan.”
@jetsilvers “Azafady andriamatoa, matanjaha, tohizo ny tolona, ampiasao ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hiadiana amin'ny fitantanana tsy ara-drariny.”
@mamanyamilo “Andriamatoa, mangataka aminao haka fotoana malalaka hijerena ny lamasinina mandritra ny ora mahabe olona mba ahitanao ny tsy mety satria tsy mandeha ny klimatizera, ary manampy trotraka izany ny olana eo amin'ny tambajotram-pifandraisana”
Afaka herinandro, mbola somary miahotrahotra i Dahlan amin'ny fampiasana ny kaonty twitter-ny vaovao. Mbola vao sioka 25 fotsiny no nalefany kanefa efa manana mpanaraka maherin'ny 50.000 sahady izy. Rariny ihany anefa izany noho ny asa miandry azy isan'andro amin'ny maha-minisitra azy, saingy nana-potoana kosa izy namaliana ny vaovao iray mahakasika ny fitakian'ny Antemiera [Chambre des représentants (DPR)] hampiasa ny zon'izy ireo hangata-panazavana ka nanontany ny politikan'i Dalhan.
@iskan_dahlan (mamaly ny sioka avy amin'ny mpanaraka azy) “@rizalcalvary: Nih Dia ‘Dosa-Dosa’ Dahlan Iskan Versi DPR: http://suarapengusaha.com/2012/04/13/nih-dia-dosa-dosa-dahlan-iskan-versi-dpr/” Tambah satu lagi: interpelasi!
@iskan_dahlan “@rizalcalvary: (lohatenin'ny lahatsoratra) Teny avy amin'i Dahlan Iskan ity mikasika ny fangataham-panazavan'ny DPR” Ampio hafa indray: fangataham-panazavana!
Nanome ny fanohanany an'i Dahlan ny mpiserasera sasany manoloana ny resaka fangataham-panazavana:
@DyanMeti: Miarahaba an'Andrimatoa Dahlan Iskan izay nandray ny fihetsiky ny olona mpanararaotra ao DPR ho toy ny ankizy.
@Sugito_btm “Hampitombo ny lazan'i Dahlan ity resaka fangataham-panazavana ity. Tohizo fotsiny ny ezaka nataonao ho fangataham-panazavana [mitodika amin'ny DPR].”